အပြစ်ကင်းစင်ပြီး ဖြူစင်လွန်းတဲ့ပုံစံလေးကြောင့် အများတကာကြား ထင်ရှားနေခဲ့တဲ့ Kpop Idol နတ်မိမယ်လေးတစ်ပါး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဖူးဖူးပြည့်ပြည့်ပုံစံလေးနဲ့ သူမတူတဲ့ အလှပိုင်ရှင်လေး Sulli ကတော့ SM Entertainment က မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ f(X) အဖွဲ့ဝင်လေး တစ်ဦးပါပဲ။ Idol တစ်ဦးဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေအများအပြားကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူပါ။
ဒါပေမဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sulli ဟာ ဝေဖန်အပြစ်တင်သူတွေရဲ့ မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်ခံပြီး အပြောအဆိုခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာ အကြိမ်ရေမနည်းလှပါဘူး။ အထီးကျန် စိတ်အားငယ်စွာနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ Sulli ဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို ရွေးချယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့မှာပဲ Kpop Industry တစ်ခုလုံးကိုကော ပရိသတ်တွေကိုပါ ငိုကြွေးစေခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြီး ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဖြူစင်လှတဲ့ Sulli ဟာ သူမကို ချစ်ခင်နှစ်သက်သူအားလုံးအား ထားရစ်ခဲ့ပြီး ထာဝရနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်ဖို့အထိ တွန်းအားတွေရရှိခဲ့တဲ့ Sulli ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် အခုကော ငြိမ်းချမ်းနေခဲ့ပြီလား? သူမကို အမြဲပျော်ရွှင်ဖေးမနေမယ့် လူကောင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံနေလောက်ပြီလား? ဆိုတာ တွေးမိတိုင်း ဝမ်းနည်းနေမိပါတော့တယ်။
၂၀၂၁ အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နေ့မှာ‌တော့ ခွဲခွာခြင်း ၂ နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဂူဂျေးဟီး အဖြစ်လည်း လူသိများတဲ့ Sulli လေးအကြောင်းကိုတွေးမိတိုင်း ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသား‌ထဲမှာ ခံစားချက် အပြည့်ပါပဲ။ အမြဲတမ်း တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိတိုင်း Sulli လေးကို မြင်ယောင်နေမိတာကတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် အကျင့်လေးတစ်ခုလိုတောင် ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ နာကျင်မှုတွေ ကင်းဝေးတဲ့တနေရာမှာတော့ Sulli လေး အပျော်ရွှင်ဆုံးနဲ့ တောက်‌ပနေဦးမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်နေမိပါတော့တယ်။
Written by Julix, Photos: Instagram
Next November လ ထုတ် ELLE magazine အတွက် Gucci King “Kai” နဲ့ Princess “IU” လေးတို့ရဲ့ အမိုက်စား collab »
Previous « V နဲ့ 'Paradise Group' က သူ​ဌေးသမီးတို့ရဲ့ dating ကောလဟာလ​တွေကို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ HYBE